Ny morontsiraka tsara indrindra hampiharana "topless" (fizarana 3) | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra hampiharana "topless" (fizarana 3)
Morontsiraka sy ny Resorts | | Africa, España, nosy, Venezoela
Ny morontsiraka ho avy dia manamarika noho ny fombany sy ny hedonisma. Ny maha-voajanahary azy ireo, ary koa ny hatsarana paradisaacal dia mahatonga azy ireo ho toerana lavorary indrindra hankafizana sy hankafizany.
sary bola: cocolima
Amin'ny laharana laharana faha-15 dia nifindra tany isika tora-pasika avy amin'i Camps Bay, in Afrika Atsimo. Marihina fa tsy maintsy mitandrina ianao any amoron-tsiraka afrikanina atsimo mba hanao fanazaran-tena tsy mahomby. Misy ny tatitra momba ireo mpaka sary mpitsikilo maro mivarotra sarinà vehivavy tsy nahy amin'ny tranokala vetaveta, mila mitandrina ianao. Na izany aza, ny tora-pasika avy amin'i Camp Bay Izy io no voafidintsika noho ny akaiky ny toerana tokana toa ny efitrano fandraisam-bahiny, trano fisotroana ary trano fisakafoanana. Mijanona dia amporisihinay ny Hotely Bay, toerana kely nefa be pitsiny izay tianao tokoa.
sary bola: Axel buhrmann
Ny isa amoron-dranomasina # 14 dia tora-pasika d`en Bossa en Ibiza, España. Izy io dia morontsiraka be fitiavana ary ny lehibe indrindra ao Ibiza. Manana bara sy kafe maoderina marobe izy io. Azo antoka ny fomba. Amin'ny alina dia tsy hisy farany ny fety, amin'ity faritry ny nosy ity dia afaka mahita klioba tsara indrindra ianao.
sary bola: Space Ritual
Amin'ny isa # 13 dia hita izy, ary ao amin'ny España, la tora-pasika avy any Estepona. Ity dia iray amin'ireo tranonkala tsara indrindra amin'ny ankapobeny Costa ny masoandro hitsidika ary misy ihany koa ny zanatany nudist ofisialin'ny faritra. Ilay vaovao Kempinski Hotel Io no toerana mety indrindra hatory amin'ny fasika sy hankafizan'ny masoandro.
sary bola: Rdoke
Ny toerana # 12 dia alain'ny ny El Beach ranoao amin'ny Nosy Margarita, in Venezoela. Ny fanitarana faran'izay tsara mihoatra ny 3 kilometatra fasika, hazo rofia ary bara mahafinaritra dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo faritra paradisa indrindra amin'ny lisitra iray manontolo. Ny mpitsidika azy dia matetika eropeana sy atsimo amerikana, ary vitsy ny mpitsidika amerikana avaratra. ny Hotel Hesperia Io no toerana ampirisihinay hitsidika, satria io ihany no hotely manana golf 18-hole.
sary bola: adihevitra
Amin'ny toerana # 11, Sydney, Aostralia, dia natsangana ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra eran-tany mandeha topless. Miaraka amin'ny kolontsaina tena miely patrana amin'ity fanao ity, ny morontsiraka dia ivon-toerana iraisana amin'ny fihinanam-bozona miboridana. Anisan'ireo morontsiraka rehetra an'ny Sydney, ilay hisongadina indrindra dia ny Bondi Beach. Amin'ny halavan'ny kilometatra iray monja, ity morontsiraka fasika fotsy sy ranomasina manga mahafinaritra ity no toerana mety handanianao tontolo andro. Izy io dia manana ny singa rehetra hifalifaly na andro na alina.
sary bola: EdTarwinski
Raha te hanohy hahalala morontsiraka maro ianao amin'ny laharana, azonao atao izany amin'ny Ny morontsiraka tsara indrindra ho an'ny topless (fizarana 1), Ny morontsiraka tsara indrindra ho an'ny topless (fizarana 2), Ny morontsiraka tsara indrindra ho an'ny topless (fizarana 4) ary Ny morontsiraka tsara indrindra ho an'ny topless (fizarana 5)!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Ny morontsiraka tsara indrindra hampiharana "topless" (fizarana 3)
Ahoana no ahatongavana any Guilin? Sidina, lamasinina ary bus